Isizathu Sokuba Sifanele Sikuphephe Ukuxoka—Fundisa Abantwana Bakho
MASITHI intombazana ithi kunina: “Ewe, ndiza kukhawuleza ndibuye ukuphuma kwesikolo.” Kodwa iyahlala idlale noontanga bayo, ize emva koko ithi kunina: “Utitshala uye wathi mandihlale ukuphuma kwesikolo.” Ngaba kufanelekile ukuthetha into enjalo?—
Yintoni le iphosakeleyo yenziwe yile nkwenkwe?
Okanye masithi inkwenkwe ithi kuyise: “Hayi, andikhange ndidlale ibhola endlwini.” Kodwa kuthekani ukuba iye yayidlala? Ngaba kuphosakele ukuthi ayikhange iyidlale?—
UMfundisi Omkhulu wayichaza eyona nto simele siyenze. Wathi: ‘UEwe wenu makabe nguEwe, noHayi wenu abe nguHayi; kuba okugqithe koko kuvela kongendawo.’ (Mateyu 5:37) Wayethetha ukuthini uYesu ngoko?— Wayethetha ukuthi sifanele senze oko sikuthethayo.
EBhayibhileni kukho ibali elibonisa indlela ekubaluleke ngayo ukuthetha inyaniso. Lithetha ngabantu ababini ababesithi bangabafundi bakaYesu. Makhe sibone oko kwenzekayo.
Kwisithuba nje seenyanga ezimbini emva kokufa kukaYesu, abantu abaninzi beza eYerusalem bevela kwiindawo ezikude besiza kumthendeleko obalulekileyo wamaYuda ekuthiwa yiPentekoste. Apho umpostile uPetros unikela intetho emnandi, apho axelela abantu ngoYesu owavuswa nguYehova ekufeni. Abaninzi kwabo bantu beze eYerusalem bayaqala ukuva ngoYesu. Ngoku bafuna ukuva okungakumbi. Ngoko ke, benza ntoni ukuze beve oko?—
Bahlala ixesha elide kunokuba bebecinga. Kodwa ekuhambeni kwexesha, abanye babo baphelelwa yimali, ngoko bafuna ukuncedwa ukuze bathenge ukutya. Abafundi baseYerusalem bafuna ukuzinceda ezi ndwendwe. Ngoko, abaninzi kubo bathengisa izinto zabo baze bazise loo mali kubapostile bakaYesu. Emva koko abapostile banikezela loo mali kwabo bafuna uncedo.
UAnaniyas nomfazi wakhe, uSafira, abangamalungu ebandla lamaKristu eYerusalem, bathengisa intsimi yabo. Akukho mntu ubanyanzelayo ukuba bayithengise. Bazicingele ngokwabo ukwenjenjalo. Kodwa abakwenzi oku ngenxa yokuba bethanda aba bafundi batsha bakaYesu. Eneneni, uAnaniyas noSafira bafuna ukuzenza bahle emehlweni abanye abantu. Ngoko bagqiba ekubeni bathi banikezela ngayo yonke loo mali ukuze bancede abanye. Enyanisweni banikela nje ngenxalenye ethile yayo kodwa bathi banikele ngayo yonke. Ucinga ntoni ngako oko?—
Emva koko, uAnaniyas uya kubapostile. Ubanika imali. Kakade ke, uThixo uyazi ukuba akabaniki yonke. Ngoko uThixo utyhilela umpostile uPetros ukuba uAnaniyas akanyanisekanga ngalo mbandela.
Bubuphi ubuxoki uAnaniyas abuxelela uPetros?
Ngoko uPetros uthi: ‘Ananiyas, kutheni uvumela uSathana akwenzise oku? Intsimi ibiyeyakho. Bekunganyanzelekanga ukuba uyithengise. Yaye nasemva kokuba uyithengisile, bekusaxhomekeke kuwe ukuba wenze ntoni ngaloo mali. Kodwa kutheni usenza ngathi unikele ngayo yonke le mali ngoxa uzisa inxalenye yayo kuphela? Ngokwenza oko uxokile, kungekhona kuthi kuphela, kodwa kuThixo.’
Esi sisenzo esinzulu gqitha. UAnaniyas uyaxoka! Akenzi oko athi uyakwenza. IBhayibhile isichazela oko kwenzekayo emva koko. Ithi: ‘Xa esiva oko kuthethwa nguPetros, uAnaniyas uyawa aze afe.’ NguThixo obangela ukufa kuka-Ananiyas! Emva koko, isidumbu sakhe siyathatyathwa siye kungcwatywa.
Kwenzeka ntoni kuAnaniyas ngenxa yokuxoka?
Emva kweeyure ezintathu, kufika uSafira. Akakwazi oko kwenzeke kumyeni wakhe. Ngoko uPetros uyambuza: ‘Ngaba nina nobabini niyithengise ngale mali nisinike yona kuphela na intsimi?’
USafira uphendula athi: ‘Ewe, siyithengise ngaloo mali intsimi.’ Kodwa uyaxoka! Ikho imali abazigcinele yona kuleyo bathengise ngayo intsimi. Ngoko uThixo uyambulala naye uSafira.​—IZenzo 5:1-11.
Yintoni esiyifundayo koko kwenzeka kuAnaniyas noSafira?— Sifunda ukuba uThixo akawathandi amaxoki. Ufuna sitheth’ inyaniso ngalo lonk’ ixesha. Kodwa abantu abaninzi bathi kulungile ukuxoka. Ngaba ucinga ukuba aba bantu banyanisile?— Ngaba ubusazi ukuba konke ukugula, iintlungu, nokufa emhlabeni kwabangelwa kukuxoka?—
Ngubani athi uYesu waba ngowokuqala ukuxoka, yaye waba yintoni umphumo woko?
Khumbula ukuba, uMtyholi walixokisa ibhinqa lokuqala, uEva. Walixelela ukuba lalingayi kufa ukuba lalingathobeli lize litye isiqhamo awayethe uThixo malingatyi kuso. UEva wamkholelwa uMtyholi waza wasitya eso siqhamo. Waphembelela noAdam ukuba asitye. Ngoko baba nesono, yaye bonke abantwana babo babeza kuzalwa benesono. Yaye ngenxa yokuba babenesono, bonke abantwana baka-Adam babeza kubandezeleka baze bafe. Yaqala njani yonke le nkathazo?— Ngokuxoka.
Ngoko siyaqondakala isizathu sokuba uYesu athi uMtyholi “ulixoki noyise wabo ubuxoki”! Waba ngowokuqala ukuthetha ubuxoki. Xa umntu exoka, wenza oko kwaqalwa nguMtyholi. Simele sicingisise ngako oku nanini na sihendeka ukuba sixoke.​—Yohane 8:44.
Kunini apho unokuhendeka khona ukuba uxoke?— Ngaba akuhendeki xa wenze into ephosakeleyo?— Nangona kusenokwenzeka ngempazamo, usenokwaphula into ethile. Xa ubuzwa, ngaba ufanele uthi yaphulwe ngumntakwenu okanye udade wenu? Okanye ngaba ufanele wenze ngathi akuyazi ukuba yaphulwe ngubani?—
Kunini apho unokuhendeka khona ukuba uxoke?
Kuthekani ukuba ubufanele wenze umsebenzi wesikolo ekhaya, waza wenza nje inxalenye yawo? Ngaba ufanele uthi uwenze wonke, nangona kungenjalo?— Sifanele sikhumbule uAnaniyas noSafira. Abazange bayithethe yonke inyaniso. Yaye uThixo wayibonisa indlela okubi ngayo oko ngokubabulala.
Ngoko kungakhathaliseki ukuba senza ntoni, ukuxoka kuya kuyenza ibe mbi ngakumbi imeko. Yaye asifanele sithethe inyaniso engaphelelanga. IBhayibhile ithi: ‘Thetha inyaniso.’ Kwakhona ithi: “Musani ukuxokisana.” UYehova usoloko ethetha inyaniso, yaye ulindele ukuba nathi senjenjalo.​—Efese 4:25; Kolose 3:9.
Sifanele sitheth’ inyaniso ngalo lonk’ ixesha. Oku kugxininiswa kwiEksodus 20:16; IMizekeliso 6:16-19; 12:19; 14:5; 16:6 namaHebhere 4:13.
Ufanele wenze ntoni xa umntwana wakho exoka? Eli nqaku lithetha ngamacebiso aseBhayibhileni anokukuncenda ufundise umntwana wakho ukubaluleka kokuthetha inyani.